यस्तो छ, हात्तिको साथी आतंक « Gajureal
यस्तो छ, हात्तिको साथी आतंक
करिव एक महिना अघिदेखी झापाको कमल गाउँ पालिका वडा नं ३ मा पर्ने सानो केरखामा हात्तीले धावा बोल्न थालेको कुरा आएको छ । पहिलो पटक एक्लै आएको हात्तीले दोश्रो पटक आउँदा साथी नै लिएरै आएकोछ । सो स्थान महेन्द्र राजमार्ग संगै जोडिएको छ । राजमार्गको उत्तर तर्फ रतुवामाई बृक्षा रोपण आयोजना द्वारा संरक्षित जंगल रहेको छ । नजिकै जंगल भएकोले हात्तीलाई सयर गर्न सजिलो भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हात्तीले पहिलो दिन कर्ण बहादुर बोहरा ( बोहरा जेठाको ) खम्बाले टेकाको, बाँसका भाटाले छेकेको र सिमेन्टको लेदोले लिपेको घरलाई हेरेर गएछ । दोश्रो पटक आएर घर लछारेर धानको ढिकुटी छर्छार पारेको समाचार आएको छ ।
तेश्रो पटक आउँदा आमा, बाबा र छावा समेतको हुल बाँधेर आउन थालेपछी गाउँलेहरुमा निंध हराएको छ । स्थानीय जेष्ठ सदश्य श्री होमनाथ भण्डारीका अनुसार हात्ती अटेर गरेर जबर्जस्ती बस्तीमा पस्ने र घरघरमा घुस्ने गर्दछन् । ढुंगा, लाठी हान्दा हेर्दै हेर्दैन, अगुल्टो र पुल्ठो लगाएर खेद्दा समेत टेर्दैनन् !
पटक पटक गरि पाँचौं पटक आउँदा हात्तीको संख्या बढ्दै गएपछी हात्तीले साथी समेत ल्याएर ठुलै घटना घटाउने हुन कि भन्ने डरले बोहरा परिवार त नजिकै रहेको दमक शहरमा बसाई सर्ने कहरमा पुगेको समाचार छ । बसाई सर्ने भनेको सम्भावना हुनेले हो । सम्भावना नहुनेको गुनासो छ – हामी सधैं हात्तीले घेरिएर बस्ने कि रमिता हेरेर बस्ने हो ? सम्बन्धित निकायबाट सुरक्षा चाहियो ।
जोर/बिजोरको मारमा मोटरबाईक, कारवाला मालामाल !
-केशवराज गजुरेल ट्राफिक प्रहरीबाट नदेखेका सयौँलाई छोड्ने, भेटेको एउटालाई निचोर्ने काम मात्र भइरहेको छ !
एक मृगौला पीडित प्रधानमन्त्रीलाई यसो भन्न चाहान्थे, भन्नै नपाई बिते !
– केशवराज गजुरेल यो एक सर्वसाधारणको कथा हो तर हजारौं जनताको प्रतिनिधिमुलक ब्यथा हो ।
डिजिटल युगमा बाको मुख हेर्ने ‘ईजिटल’ आईडिया !
-केशवराज गजुरेल आज बुबाको मुख हेर्ने दिन । बुबा जिउँदै हुनेले प्रत्यक्ष तनबाट, नहुनेले
युटियल : टाप कि टाट ?
केशवराज गजुरेल अन्तत: टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी युटिएलका सञ्चालकहरु सम्पर्क विहिन छन् । पर्दा पछाडीबाट
‘थुक’ संबन्धी उत्कृष्ट थुट्किलाहरु !